Isina moto jira fekitori - China Isina moto machira Vagadziri, vatengesi
Ceramic fiber jira rakagadzirwa neceramic fiber uye chimwe chikamu che organic fiber, yakarongedzwa negirazi fiber (simbi waya), yakarukwa kuita shinda, uyezve yakarukwa kuita machira.
Kushandiswa kukuru kweutsi hweketeni rusvingo jira:
a. Kuchenesa kwemagetsi: utsi keteni remadziro jira rine yakakwira magetsi yekuisa giredhi, inogona kumira yakakwira voltage mutoro, uye inogona kugadzirwa kuve inodzivirira machira, ruoko uye zvimwe zvigadzirwa.
b. isiri-yesimbi muripidzi: machira erabhoni yesilicon inogona kushandiswa seyakagadziriswa chinongedzo chinobatanidza mapaipi. Inogona kugadzirisa kukuvara kunokonzerwa nekupisa kwekuwedzera uye kutonhora kutapudza, uye jira resilicone ine yakanyanya kupisa tembiricha, anti-ngura, anti-kukwegura kuita, kushanduka uye kushanduka. Inogona kushandiswa zvakanyanya mu petroleum, indasitiri yemakemikari, simenti, sosi yesimba uye mimwe minda.
Fireproof tarpaulin inogadzirwa nepamusoro tembiricha inodzivirira, anti-corrosion uye yakasimba-yakasimba girazi fiber jira, iro rakavharidzirwa kana rakaisirwa nhumbu nesilicone rabha. Icho chitsva chakasanganiswa zvinhu chigadzirwa ine yakakwira kuita uye yakawanda-chinangwa.
Jira risingadziviri moto uye Silicone Tepi
Jira risingadzivirwe moto rinogadzirwa zvakanyanya neshinda isingatsve uye isingatsve, inochinjiswa neakakosha maitiro. Main maficha: isingatsve, yakanyanya kupisa tembiricha (550-1100 madhigirii), chiumbwe chimiro, hapana kutsamwa, nyoro uye kuomarara magadzirirwo, nyore kuputira zvisina kuenzana zvinhu nemidziyo. Mucheka usina moto unogona kudzivirira zvinhu kubva kunzvimbo dzinopisa uye nzvimbo dzinopenya, uye kudzivirira kana kupatsanura kupisa zvachose.
Jira risingadziviri moto rinokodzera kutungidza uye dzimwe nhambo nemaraki uye zviri nyore kukonzera moto. Inogona kudzivisa marimi, slag, simbi yekumonera, nezvimwewo inogona kusarudzira nzvimbo yebasa, kupatsanura denderedzwa rekushanda, uye kubvisa njodzi yemoto inogona kukonzereswa nebasa rekusvira. Inogona zvakare kushandiswa kupenya kwechiedza, uye kumisikidza yakachengeteka, yakachena uye yakaenzana nzvimbo yekushanda.